WARARKA SOOMAALIDA WISCONSIN iyo MINNESOTA
Warbixinada C/raxman Ceynte ee maanta (4/1/3) waxaa ka mid ah:
Xawaaladda Barwaqo oo shatiga Minnesota loo cusbooneysiiyey
Somalida Barron, Wisconsin oo markii ugu horeysay xafiis jaaliyadeed Furanaya
Boqolaal soomaali ah oo intooda badani waddanka ku cusub yihiin ayaa ku nool tuulo aad u yar oo la yiraahdo Barron, Wisconsin oo 100 Mile u jirta Minneapolis, Minnesota.
Soomaalidan ayaa tiradoodu sii badaneysay maalinba maalinta xigta, maadaama eey shaqo aan wax xirfad & luqad toona u baahneyn si fudud uga heli karaan meeshaas.
Dallada (African Community Development Association) ama ururka horumarinta jaaliyadda Afrikaanka ah ayaa u oggolaaday soomaalida Barron, Wisconsin ineey isla shatigooda xafiis jaaliyadeed ugu furtaan magaaldaas, si eey danohooda jaaliyadeed dowladda ula hoos galaan.
dhowr bilood kahor ayeey aheyd markii dhallinyaro soomaali ahi isku taxalujiyeen ineey Masjid lagu tukado ka furaan halkaas, dadaal dheer kadibna u suura gashay ineey masjidkaas hirgaliyaan.
Sida uu ii sheegay xubin kamid ah guddiga qabanqaabada & abaabulka qorshaha jaaliyadda, xafiiskan marka la furo wexeey ujeedadiisa ugu balaarani xooga saari doontaa, caawinta qoysaska african-ka ah ee u baahan caafimaadka, gaadiidka, waxbarashada & waliba tarjumaada oo ah mid lagama maarmaan ah.
Sidoo kale wuxuu Xafiiskan cusub maaligalin doonaa dhaqdhaqaaqyada Sports-ka, gaar ahaan Kubbada Cagta oo ah mid eey soomaalidu aad ugu ciyaaraan Barron, Wisconsin.
dhaqan celiska jaaliyadda Afrikanka ahna waa mid laf dhabar u ah dadaalka xafiiskan African Community Development Association- Barron, Wis chapter.
ururku wuxuu ugu baaqayaa dhamaan jaaliyadda African-ka ah, gaar ahaan soomaalida ku dhaqan agagaarka Barron, Wisconsin ineey kala qeyb qaataan dadaalka eey wadaan, isla markaana eey la soo xiriiraan guddiga qabanqaabada xafiiskan .
shirkadda Barwaqo Financial Services oo kamid ah shirkadaha soomaaliyeed ee wax ka xawila gobolkan Minnesota ayaa shalay loo cusbooneysiiyey shatigoodii Minnesota.
Xawaaladaha soomalida ayaa wixii ka danbeeyey dhidibba u siibkii shirkadda Barakat billaabay ineey si sharci ah uga shaqeystaan gobolkan, iyagoo iska dhiiba canshuurta, isla markaana kharash xoog leh ku bixiya lahaanshaha shatiga xawaaladda.
wixii ka danbeeyey Sept 11, Xawaaladaha soomalida ee Mareykanka ka jira ayaa imminka u oggolaada dowladda mareykanka & hey'adaha danbi baaristaba ineey si joogto ah ula socdaan dhaqdhaqaaqyadooda dhaqaale, sidaas awgeed ayeey hadda ugu faraxsan yihiin in mar uun loo oggolaado ineey shatigooda ganacsi sii heystaan.
AFEEF: Aragtida qoraalkaan waa mid u gaara qoraaga nasoo gaasiisey.